Izao tontolo izao dia feno hatsarana ho an'i Arun, mpizahatany amin'ny bisikileta
Home » Vaovao momba ny fizahantany » Izao tontolo izao dia feno hatsarana ho an'i Arun, mpizahatany amin'ny bisikileta
Ny firenen'Andriamanitra dia fonenan'i Arun Thadagath. Niala tamin'ny bisikiletany tamin'ny taona 2019 izy fa tsy fantany fa hiodina ambony ambany izao tontolo izao mandritra ny fialantsasatra ataony.
Lord Buddha dia nanampy an'ity mpizaha tany karana ity rehefa niaina tontolo tsara tarehy toy izany koa izy nandritra ny krizy ratsy indrindra nandalo ny ankamaroan'ny taranaka velona. Tsy nisy na inona na inona mahazatra tamin'ity fialantsasatra ity.
Arun dia mpizahatany karana, izay nahita firenena fito tamin'ny fialan-tsasatra tsy nitovizany tamin'ny zavatra mety hiainan'ny mpizahatany amin'ny vanim-potoana mahazatra.
Ny tsara dia mivoaka avy amin'ny olona, ​​ary namadika ny fialantsasatry ny bisikiletany tamin'ny traikefa nahafinaritra sy traikefa tsy hohadinoiny.
Rehefa niainga hamakivaky an'izao tontolo izao tamin'ny bisikileta bisikileta tamin'ny 19 septambra 2019 i Kochi, mpiasan'ny governemanta monina any India, Arun Thadagath, dia tsy nisy nanampo ny hamonoana an'izao tontolo izao tao anatin'ny volana vitsivitsy.
Tao anatin'ny telo volana taorian'ny nialany tany Kochi dia voalaza fa nanomboka niely ny virus coronavirus. Na izany aza, hatramin'ny nanambarana ny Covid-19 fa areti-mifindra, dia nitaingina firenena fito i Arun ary niverina tany Kerala volana vitsivitsy lasa izay, ary nilaza fa fantany izao fa ny fitiavana sy ny olombelona dia mihoatra ny zavatra hafa rehetra.
Nandritra izay volana rehetra izay dia nitety an'i Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonezia, Kambodza ary Laos aho. Nipetraka tany Laos nandritra ny fito volana teo ho eo aho nandritra ny fanidiana. Tsy dia nisy fameperana be dia be toy ny tany India, mba hahafahako mifindra, ”hoy izy.
Raha niresaka momba ny zavatra niainany nandritra ny fanidiana, hoy i Arun, “Tany amin'ireo toerana nandehanako dia tsy noheverina ho zava-dehibe ny raharaha rehefa nambara ny fanidiana azy, tsy toy ny tao Kerala, izay nisy ny fifanakalozan-kevitra nahery vaika aza talohan'io.
Nandritra ny dia rehetra dia nahita fialofana tao amin'ny tempolin'i Buddha i Arun, izay nanaparitaka hafatra momba ny fiainana maitso. “Rehefa maizina ny andro dia nandeha niditra tao amin'ny tempolin'i Buddha akaiky indrindra aho ary nanontany raha afaka matory ao aho amin'ny alàlan'ny tenin'ny tanana. Tsy nisy na iza na iza nilaza ahy tamiko, ”hoy izy.
Raha nitadidy ohatra iray tany Myanmar nandritra ny dia izy dia nilaza fa nifandray tamin'ny vehivavy holandey iray antsoina hoe Monica, izay efa nitsidika an'i Kochi teo aloha. “Mipetraka any amin'ny sisintany Myanmar-Thailand izy izao ary rehefa fantany fa tany an-toerana aho dia nasainy hiaraka aminy aho. Nalefany tamiko ny toerana misy ny GPS ary rehefa nizaha ny làlan'ny Google Maps aho dia lalana mahitsy mankany amin'ny toerany io. Nanomboka nandeha bisikileta nandritra ny roa andro sy telo aho namakivaky ny havoana sy ny tendrombohitra. Tsapako fa tsy nifarana na oviana na oviana ny dia. Reraka aho ary nanomboka nitady fanampiana tamin'ireo fiara nandalo ahy indraindray. Nilaza daholo izy ireo fa tsy nahazo alàlana hampiantrano vahiny, ”hoy izy, ary nanampy fa tany Shaan, faran'ny atsimon'i Myanmar izy.
Sahirana koa i Arun nitady zavatra hohanina na hosotroina. “Nanapa-kevitra ny tsy hampiasa rano tavoahangy mihitsy aho. Indray tolakandro dia bisikileta roa niaraka tamin'ny polisy efatra no nanakana ahy ary nilaza izy ireo fa tsy maintsy nosamboriny aho rehefa namakivaky faritra voafetra feno vanja milevina aho. Tamin'ny taona 2018, olona 470, indrindra fa ny vahiny no maty noho ny fipoahan'ny baomba tao, ”hoy izy.
Na dia tsy nahalala ny lalàna aza izy, dia vonona ny hanaiky ny sazy na dia hoe migadra aza. “Tsy fialan-tsiny ny tsy fahalalana ny lalàna. Nanapa-kevitra ny handeha amin'ny onja aho. Nolazaiko azy ireo ny diako izay mampiseho lahatsoratra iray navoaka tao amin'ny Times of India rehefa nanomboka ny dia aho. Nahagaga fa nafana ny olona tao amin'ny paositry ny polisy. Nasain'izy ireo nitety rivotra aho mba hialana amin'ny bisikileta. Izaho kosa dia nilaza tamin'izy ireo fa fanapahan-kevitro ny tsy hanao sidina raha tsy vita ny dia. Nandamina taxi izy ireo mba handehanako any Rangoon ary niverina namaky ny lohasaha aho. Fahatsiarovana mahafinaritra izany, ”hoy izy.
Tao amin'ny tempolin'i Buddha any Lampang, Thailandy, dia moanina no nampiantrano an'i Arun. “Nanantitrantitra izy fa hijanona iray volana eo aho. Fantany fa vegan aho, ny ampitso maraina, dia nomeny voankazo sy sakafo aho. Niaraka taminy ihany koa aho ny maraina ho an'ny bhiksha. Aorian'ny herinandro, tsapako fa zava-dehibe ny fialako na raha tsy izany, mety ho hitako ny faritra mampionona ahy. Notantaraiko azy izany ary tamin'io alina io dia nomeny sakafo sakaosy feno sakaosy roa, volafotsy sy firavaka volamena, karipetra sns. ”, Hoy izy.
Ny tsingerin'i Arun dia tototry ny entana. “Tsy haiko ny nitondra izany rehetra izany tamin'ny bisikiletiko ary tsy te hitondra zavatra lafo be koa aho. Ka rehefa namakivaky an'i Myanmar aho dia natolotro ho an'ny sahirana, ”hoy izy.
Ny tena nalainy tamin'ny dia dia ny hoe: “feno hatsarana izao tontolo izao ary mahatsiaro ho maivana ianao rehefa tsy manana na inona na inona”, hoy izy. "Tamin'ny fotoana nanolorako zavatra izay tsy tena nilaiko, dia nahazo fahalalahana indray aho," hoy izy.